Miorina • Manosotra vatana sy fanorana NuRu
Tongasoa eto Tantra any San Francisco & Silicon Valley!
Na mitady ny farany fitsaboana amin'ny otra ianao na ny modely tsy miankina sy ny fonosana fitetezam-paritra spaoro dia manome modely mpitsabo ambony ho an'ny traikefa ara-nofo ianao!
Tantra Kundalini Massage - manambatra teknika fitsaboana fanorana amin'ny vatana tsara tarehy, ao anatin'izany ny teknika ara-nofo hananganana sy hampitomboana ny angovo sy ny ecstasy amin'ny ambaratonga avo indrindra. Anisan'izany ny fandroana aromatherapy biolojika miaraka amina savony savony sy fanasan-tena amin'ny vatana sy fikarakarana vatana volamena 24 karat, fombafomba feno vatana mangatsiaka tantely, fomba fiasa teknika miafina tantra hanampy anao hahatratra & hanalava ny fanjakana ambony angovo, kundalini & ecstasy! Zahao ny fomba hanatsarana ny fahafinaretan'ny vehivavy amin'ny alàlan'ny fampiharana teknika tantra. Afaka manome fiadanam-po sy fahafinaretana fanampiny amin'ny fitaovana avo lenta sy kilasy fitsaboana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izahay. Manentana anao izahay hampiasa vola amin'ny fahasalamana sy fahafinaretanao!
Distrika ara-bola, San Francisco, CA, Etazonia